ပြည်တွင်းသတင်း | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS) | Page 1894
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း Page 1894
ပထမဆုံး ခဲပန်းချီပြပွဲတစ်ရပ်ကို မတ်လ ၈ ရက်နေ့က ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်မှာ ပြသ
https://www.youtube.com/watch?v=G76ynziA6Ss မန္တလေးမြို့မှာ ပထမဆုံး ခဲပန်းချီပြပွဲတစ်ရပ်ကို မတ်လ ၈ ရက်နေ့က ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်မှာ ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို သတင်းထောက် လင်းလင်း တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။
စိုးဝင်းငြိမ်းရဲ့ Portraits ဓါတ်ပုံပြပွဲ
https://www.youtube.com/watch?v=RmG_fXxtCBQ စိုးဝင်းငြိမ်းရဲ့ Portraits ဓါတ်ပုံပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ လောကနတ်အနုပညာပြခန်းမှာ မတ်လ (၆)ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို သတင်းထောက် အောင်မျိုးသန့်က တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Win Pe 1 Art Exhibition 2014
https://www.youtube.com/watch?v=3-xt3XDWh8c Win Pe 1 Art Exhibition 2014 ကို ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်က ဗိသာနိုးပန်းချီပြခန်းမှာ ခင်းကျင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို သတင်းထောက် နဒီက တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က ကလေးလူငယ်တွေအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပသွားဖို့ပြင်ဆင်
https://www.youtube.com/watch?v=bDpoJnMDUf4 ရခိုင်ပြည်နယ်က ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကလေးလူငယ်တွေအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ကျင်းပသွားဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို သတင်းထောက် ဖြူဖွေးက တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းဆင်းလက်ရာမွန်ပြပွဲနဲ့ စင်တင်ကပွဲ (ရန်ကုန်)
https://www.youtube.com/watch?v=_botFtsPpnU ပထမဆုံးအနေနဲ့ အနုပညာ အထက်တန်းကျောင်း (ရန်ကုန်) က ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းဆင်းလက်ရာမွန်ပြပွဲနဲ့ စင်တင်ကပွဲတွေ တင်ဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ရှု့စားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို သတင်းထောက် လင်းလင်းက တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
အာဆီယံလူငယ်ဖိုရမ် ၂၀၁၄ ကို ဂုဏ်ပြု ရိုက်ကူးထားသော ရုပ်သံမှတ်တမ်း
https://www.youtube.com/watch?v=ZF-QSke_CkM ဆက်လက် ရှု့စားကြရမှာကတော့ ရုပ်သံမှတ်တမ်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတပတ်ရုပ်သံမှတ်တမ်းအစီအစဉ်မှာတော့ မကြာခင် ကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့ အာဆီယံလူငယ်ဖိုရမ် ၂၀၁၄ ကို ဂုဏ်ပြု ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်သံမှတ်တမ်းကို ရှု့စား ကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Weekly Interview (ဖိုရမ်ဖြစ်မြောက်ရေး ဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေသူ)
https://www.youtube.com/watch?v=u9cRi3HO4Z4 ဒီသီတင်းပတ်ရဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း အစီအစဉ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပနေတဲ့ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲနဲ့ အတူ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမယ့် အာဆီယံလူငယ်ဖိုရမ် ၂၀၁၄ ကို လာမယ့် မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာ စတင် ကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အပေါ် ဖိုရမ်ဖြစ်မြောက်ရေး ဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြီးဆုံး အွန်လိုင်း အိမ်ခြံမြေ၀န်ဆောင်မှု ၀က်ဆိုက်ကို စတင်မိတ်ဆက်
https://www.youtube.com/watch?v=5EJ4k55fHF0 ဂျာမနီနိုင်ငံက လူငယ်တွေ Years or your body payday loans online away re-styled neck this. Beat payday loans online and even. Plant someone louis vuitton...
ကလေးငယ်တွေအတွက် နွေရာဦ သတင်းစာ သင်တန်းဖွင့်လှစ်
https://www.youtube.com/watch?v=rIseHAw0HBI မန္တလေးမြို့က ဇာတိမာန် လူငယ်စာဖတ်အသင်းကနေ ကလေးငယ်တွေအတွက် နွေရာဦ သတင်းစာ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချနေပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို သတင်းထောက် ဖြူနှင်းဖွေးက တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။
မြန်မာ့ ပရဟိတ လူငယ်များအသင်းက အခမဲ့သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချ
https://www.youtube.com/watch?v=0bn-h9F5Krw လူငယ်တွေမှာ ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်တွေ တိုးတက်လာဖို့အတွက် မြန်မာ့ ပရဟိတ လူငယ်များအသင်းက အခမဲ့သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို သတင်းထောက နဒီက တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
1...1,8931,8941,8951,896Page 1,894 of 1,896